१७ वर्षकी सपना : प्रेमीसँग रातभरी जंगलमा बिताइन्, 'बिहान प्रेमी घर गए तर उनी'
तानसेन नगरपालिका वडा नं.७ मा जंगलमा झुण्डिएको अवस्थामा युवतीको शव फेला परेको छ । रस्साकी १७ वर्षीया सपना बि.क. को बुधवार दिउँसो बाँसटारी नजिकैको जंगलमा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो ।
झुण्डिएको शवको प्रकृति आत्महत्या नभई आत्महत्याका लागि बाध्य बनाइएको वा हत्या गरेर झुण्ड्याएको पनि हुन स्थानीय तथा परिवारको आशंका गरे ।
आत्महत्याको लागि बाध्य बनाइएको हुनसक्ने भन्दै पीडित परिवारको उजुरी दिएको थियो । उजुरीकै आधारमा बुधवार १८ गते नै शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने १८ वर्षीय लोक नारायण खनाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
खनाललाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको एस।पी कृष्णराज सापकोटाले बताएका छन् । शवलाई बिहीवार जिल्ला अस्पताल पाल्पामा पोष्टमार्टम गरिएको छ ।
उनीहरु बाँसटारीमा भेट भए र नजिकैको जंगलमा पुगे । आरोपित खनालका अनुसार १६ गतेको रात उनीहरुले सोही जंगलमै बिताएको देखिन्छ । सपनाको घरमा भने १६ गते साँझबाट खोजी भयो । उनी नफर्केपछि उनको खोजी गर्ने क्रममा सपनाकी साथी मार्फत सपनाको प्रेमी रहेको थाहा पाएपछि प्रेमीलाई सम्पर्क गरि पिडित परिवारले पाल्पा बोलाए ।
पिडित परिवारले पटक पटक टेलिफोन गरेपछि उनी १८ गते दिउँसो बुटवलबाट पुनः बाँसटारी आइपुगे । आफुहरु सित भेट नभै प्रेमी एक्लै जंगलतिर गएर उनले सपना ज्युउँदो नहरेको बताउदै घरका हवुरबुवालाई जंगलमै वोलाए र उनीहरुले १६ गतेको रात बिताएको स्थानमा पुग्दा नजिकैको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा सपनाको श८व फेला परेको उनका हजुरबुवा एक नारायण चुडारले बताए ।
शवमा रगतको डाम समेत देखिएकोले पनि शारीरिक सम्वन्धपछि उनको हत्या गरि झुण्ड्याइएको हुन् सक्ने भएकोले सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने उनले माग गरेका हुन् । सपना स्थानीय बिद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत थिइन् ।